Sanadka cusub iyo saadaasha Somaliska | Somaliska
Maanta waxaan sagootinaynaa sanadka 2011 oo noqonaya sanad ay Soomaalida si fiican u xasuusan doonaan inagoo gacmo furan ku soo dhaweyneyna sanadka 2012. Sanadkii 2011 waxaan u soo joognahay dhacdooyin muhiim ah oo ka dhacay dalkii hooyo iyo dalkaan aan ku nool nahay ee Sweden.
Sanadkii hore ee 2010 ayaan ku tilmaamay sanadkii caqabada Soomaalida kaasoo ahaa sanadkii la joojiyay mideynta reeraha Soomaalida. 2011 ayay Soomaalidu rajo ka qabaneen in caqabadaas laga qaado inkastoo aysan taasi dhicin ayaa hadana waxaa dhacday in aan helnay balan qaadyo iyo in la mideyn doono Soomaalida 2012.
Hadaba maxaan ka filan karnaa sanadka 2012? Haddii aan cabiro rayigayga waxay ila tahay in sanadkaan uu noqon doono mid Soomaalida Sweden soo dhaweeeya. Dhinaca socdaalka ayuu noqonayaa sanadkaan mid muhiim ah maadaama la filayo furitaanka mideynta reeraha bisha July 2012. Ka hor inta aan la gaarin bishaas ayaan dhagta u taagi doonaa horumarka laga sameeyo badalaada sharciga lagu mideynayo Soomaalida iyo hordhigida baarlamaanka.
Waalidiin iyo caruur badan oo mudo kala maqnaa ayaa heli doona fursadii ay mudo sugayeen. Dhinaca kale waxaan cadeyn sida ay noqon doonto xaalada lamaanayaasha isku hiloobay ee aan caruurta isku dhalin. Qiyaasteyda ayaa ah in aysan si fudud u dhici doonin mideynta dadka aan wax isku dhalin oo xitaa haddii shuruuda baasaboorka iyo aqoonsiga meesha laga saaro ay jiri karto shuruudo kale. Ugu yaraan waxay samayn karaan in ay faraha ka qaadaan dadka laysku keeno oo aysan suurto galin in ay wadan kale oo Yurub ah iska dhiibaan.
Dhinaca shaqada ayaysan jirin ififaalo cusub oo u muuqda Soomaalida. Waxaan nahay dadka ugu shaqo la’aanta badan soo galootiga ku dhaqan Sweden. Isbedelka ku yimaada arintaas ayaa ah mid aan cadeyn maadaama suuqa shaqada ee Sweden uu sii adkaanayo. Waxaa midaas looga itaal roonaan karaa in xaga ganacsiga xooga la saaro oo Soomaalidu dhexdooda ay abuuraan ganacsiga kuwaasoo shaqo u abuuri kara xubnaha kale ee bulshada.
Inkastoo aanan wax ka qorin xaalada dalkii hooyo ee Soomaliya ayaan hadana indhaha laga daboolan karin xaaladiisa. Ma saadaalin karo xaalada isbadalka badan ee Soomaaliya balse waxaan ilaahay uga baryayaa nabad degdeg ah iyo barwaaqo raagta.
maashaa allaah waa saadaalin aad u wanagsan laakiin jimcaale brother dadkayagan diidmada haysta leh ee mudada jooga mayaanan ka xaqlahayn qof soomaaliya ka imanaaya?……………………sc
waxan salaamayaa asxaabta somaliska ku xiran iyo mr-jimcaale, waxaan kaloo soo dhowaynayaa sanadka cusub 2012 ilaahay inuu inooka dhigo mid aan wax badan ku faraxno haday somalia noqoto iyo haday sweden noqtoba. Okej,
MR:jIMCAALE aad ayaad u mahadsan tahay sadaalintaada wanaagsan oo ah sanadka cusub ee 2012 iyo rajadda familiyaadka oo aan ilaahay ka baryeeyno inuu inooka dhigo mid wanaagsan. Aamiin yaa rabbi.
December 31, 2011 at 21:45
asc kuli soolida wadanka iyo dibadiisa joogta marka labaad maasha allaah sanadkaan waxaan ilaah kabaryayaa inuu noogu dhigo sanad qeer iyo caafimaad iyo cumridheer ilaahey intaba nasiiyo teeda kale howlahaan nagawada xayiran ee arimahaan sweden hadey qeer noogu jiraan ilaahey hanoo wada fududeeyo kuligeena waana mahadsantihiin sanad wacan iyo qeer iyo caafimaad. by bahal hoose swede
December 31, 2011 at 22:25
asc dhamaan umada somaliyeed waxan leyahay sanad wanagasan ilaah sanadkaan kiisa kale cafimaad iyo cibaado wacan cibri dheer hanagu gaarsiiyo alah hanooga dhigo kaan ku midoobi laheen caruur iyo waalid iyo xasaska dhaman isku imadaan ilaah wadan keeni hooyo nabad hanooga dhigo
waad mahadsantahay mr jimcaale
sanad walliba hodiyo hool iyo dhibato wuxu adima leyahay waa laga helayo hodhow lagu xasuustaa noqo kinoo hagagee loo wada han wenyahay ilahay sanadka 2012 hanooga dhigo wadankeena nabad waarto waxana idin leyahay dhaman aqyaarta somaliska.com sanad wanagsan
January 1, 2012 at 10:33
asc walaaheyga sanad wanaagsan qeyr kiisa watay alaha nooga dhigo oo wadankeena nabad iyo barwaaqo ilaaaho sanandkaan qeyrkiisa nawaafuji gaaladaan alaha nagaqabto inta kala maqan alaha isku keeno jimcaale qeyr alaha kaa siiyo intaa magac somaliyed wax u qabatay alaa kaa abaal marin doono walaakeyga ilaahoo naga aqbal ducada aaaaaaaaaaaaaaaamin
January 1, 2012 at 13:13
Allah ka Xiisho Kane Cabso Hane ilawin ina tahay Cabdi Allah Caqabati Somalida maxa ugu Magac dare 2010? Somalia 22 sano waxa heysatay Musiibo waxane ka Caroday Allah Caqabade isu kenina Alah uma kennin war Allah ka xishoda Somaline mel waliba lo jeedo way la jiran oo dadku ma laha miya wax logu so hagago Diin islam ne ma hestan Mid Galane ma hestan Subxana Allah Ubadka Somali mel walibe Jogan Allah ayan u waydin inu ka Bad badiyo Badinimada aaad la donaysan Adiga igu waxa kug fikradaba 20ka bisha wax igu darsan yahay dadka dhaha oo Ubadka dhan ba in 20 1100 kr lo so diro u dhala Allah ka Bad badiyo Fasade wadan waxad arke ayuta gali laha lkn marka ilmaha le keno gala hada ma igu filmo lacagta War Rabiga idin Qalkhay ka Xiishoda,
Waaa Suale ma taqanan Horta Micnaha logu Dabad Dego Sanadkan kkk mise yaa dhintay ma dhahaysan waa iska socotan Somal iyo aqli badani
Maxa ugu Dabal degtay Dhalashadi Nabi Cise (CS)
Ciise Caleyissalaam waa Addoon Allah iyo Rasuulkiisa, ma’ahan Allah mise Waxad ka mid Noqoten Kuwaa Qasaray ee shalaytami Dona Malinta Youma Xiista ah Allahu Akbar Carada Dadka iyo Dalka Somal ku dhacday Allah wax ma nogu daro Allah naso Hadeyo inta an Heysano Fursada ah nolosha Malin an Towbah ken laga aqbalayn oo waysan wax ba ku Tarayna Jirte o Waqtiga ka dhacaye Allah yahdina dhamanba Yaa Rabi
January 1, 2012 at 13:32
Tolow Guryaha ne Nalal ma ku Xiraten Si Toom ne idinku Imado hada ba waxe ugu magaca Daren Dhalashadi Nabi Ciise (CS) u Dabala Degten
January 1, 2012 at 14:43
Asc, brother adiga ma waxaad dooneysaa in aad wax saxdo mise in aad qalad qalad ku saxdo? hadalkaaga waxa uu iila muuqdaa jees jees iyo nin isagu kaligiis saxan umada kalena ay qaldanyihiin.
Haddaan u soo noqdo arinta aad ka dhawaajisay, halkaan anigu wax dabaal deg sanad cusub ma sheegin umana dabaal daggo sanad cusub ee waxaan cabiray fikirkayga ku aadan 12 bilood ee nagu soo aadan. Waan ku qasbanahay in aan isticmaalno taariikhda wadankaan laga isticmaalo.
shaafici mohamoud ahmed says:
sanadkaan cusub 2012 waxaan ilaahay ka baryaayaa :-
– in uu nooga dhigo sanadkii ilaahay umada soomaaliyeed ay helaan nabad, amni barwaaqo iyo karaamada iyo sharafta ay ku lahaayeen dunida ilaahay isoo celiyo ..
-in ilaahay umada soomaaliyeed quluuubtooda mideeyo.
– in ilaahay ka saaro dhibaatada 20sano ay ku soo jireen.
-in umada soomaaliyeed ka qabto kooxda ku soo gabaneeso diinta islaamka iskuna magacowday in ay mujaahidiin yihiin, ilaahay haka dhigo sanadkii laciribtiri lahaa .
-in umada soomaaliyeed ilaahay ka qabto qof walboo lugooyadooda iyo dhibaateentooda ka shaqeenaaya .
fadlan walaalayaal aaamiin ila dhaha …
January 1, 2012 at 22:07
January 2, 2012 at 22:42
waa idin salaamay dhamaan umada soomaaliyeed ee aqrisada boga soomaaliska jimcaalana waa ku mahadsan yahay sida wanaagsan ow nooga dharjiyo waxyaabaha aan aadka u xiisayno oo ah wararka imagareshinka waxa kale oo kaaga mahad naqaayaa saadaashaada wanaagsan allaha ku xafido sanadkaana ilaah ha nooga dhigo kii aan ilmaheena kula midoobi laheyn iyo ………….. aamiin
January 3, 2012 at 11:24
asc. Dhamaan soomaalida waxaan u rajeynayaa sanadkaan in uu ahaado sanad aan helno dowlad soomaaliyed oo aan ku meelgaar aheyn.Waxaan kaloo jeclaan lahaa walaalahayga soomaaliyeed in aan u sheego in sirteena hoose aanaan uga sheekeyn ajanamiga, ma ogtihiin dadyow ajanami ah oo qaxooti ah in ay naga dacwoodeen kana xun yihiin sida soomalida sharciyada loo siiyo. garabso una gargaar walaalkaa— saaxibkaaga dhabtaa waa SOMALI